Indônezia - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Indonezia)
Republik Indonesia ((id))
Repoblikan' Indonezia ((mg))
Teny filamatra : Bhinneka Tunggal Ika
Teny ofisialy Bahasa Indonesia
6°10′5″S 106°49′7″E﻿ / ﻿6.16806°S 106.81861°E﻿ / -6.16806; 106.81861
Tanàna ngeza indrindra Jakarta
- Rano (%) faha 15
- hakitroka faha 4
268 512 352 mpo.
Anaran'ny mponina Indonezianina, Indônezianina
IDH (2019) Endrika:Mihidina 0,707 (atonontonony) faha 111
Sandam-bola rupiah (IDR)
Faritr'ora UTC +7 à +9
Hiram-pirenena Indonesia Raya
I Indônezia, na Repoblikan' i Indônezia (amin' ny fiteny indônezianina Republik Indonesia), dia firenena eo anelanelan' i Azia Atsimo Asinanana sy i Ôseania. Ny firenena Indônezianina dia tamba-nosy manana nosy miisa 17 500, ka ny tamba-nosy lehibe sy mivelatra indrindra eto an-tany. Ny isan' ny mponina ao aminy dia 240 tapitrisa mahery, firenena fahefatra be mponina indrindra i Indônezia ary firenena mozilmana voalohany indrindra raha ny isan' ny mpino no heverina. I Indônezia dia Repoblika Demôkratika tsy manana fivavaham-panjakana. Jakarta no renivohi-pirenena ary anisan' ny tanàna lehibe indrindra eto an-tany.
Tamin' ny taonjato voalohany taor. J.K., ny tamba-nosy indônezianina dia faritany anjadian'ny kolontsaina hindoista avy any India ary ny kolontsaina avy any avarany. Ny lehiben'ny tanàna-fanjakana eo amin'ny morontsiraka indônezianina dia nisafidy ny endrika ara-kolontsaina sy ara-pinoana ary ara-pôlitika indianina (hindoa). Ary hatry ny taonjato faha-8, nikisaka tany amin' ny fanjakan' i Srivijaya, fanjakana iray lehibe nisy tao atsimon' i nosy Somatra, ny afovoan' ny fifandraisan' i Azia Atsimo sy Azia Atsinanana. Teo Java indray dia nivoatra ny kolontsain' ny mponina mpamboly vary (noho ny fisian' ny fanjakana sy ny fianjadian' ny haifomba Srivijaya tsy lavitry ny eo) namela ny fanjakana hanamboatra tsangambatom-pinoana. Teo no fanombohan' ny taona klasika indônezianina.
Ny lakandranon' i Melaka dia lasa toerana be mpandeha sambo satria mankeo ny ankabeazan' ny landy hamidy any Azia Andrefana sy any Eorôpa. Ny tamba-nosy Indônezianina dia mampiharo amin' ny fanaparitahana iraisam-pirenena anjakazakan' ny mpivarotra mozilmana. Mivadika silamo hatrany ny pritsin' ny seranana.
Tamin' ny taonjato faha-16, tamin' ny taonan' ny Fahitam-baovao tany Eorôpa Andrefana noho ny fahitana kôntinenta vaovao, hitady lalana hankany Azia Atsimo sy Atsinanana ny hery am-pihariankarena eorôpeana, mitady ny lalana hahafahany mividy episy ny Eorôpeana. Tamin' ny 1511, resin' ny sambo pôrtogey ny Malay tao Melaka ary nanomboka nofeheziny ny lalana mankany Azia Atsinanana ka toraka izany koa ny fivarotana landy sy episy. Ny Hôlandey no nandresy ny Pôrtogey tao Melaka tamin' ny 1605 ary nanomboka nozanahan' ny Hôlandey i Indônezia nanomboka tamin' io taona io. Taona amam-polony tety aoriana, nanomboka nanjanaka nipetraka tany amin' ny Nosin' i Java ny Hôlandey ary nataony renivohitra ny tanànan' i Jayakarta, novainy anarana ho Batavia (Jakarta ankehitriny). Potiky ny adim-pifandimbiasan' ny fanjakan' i Mataram ny nosy Java ka nanome tsikelikely ny taniny tamin' ny mpanjanatany hôlandey. Tamin' ny taonjato faha-19, manomboka ny fitsentsefana ara-toekarena ataon' ny mpanjanatany hôlandey, ary mametraka ny lalàny eo amin' ny tamba-nosy izy ireo. Ka nipoitra tamin' ny taonjato faha-20 ny fihetsehan' ny olona tia tanindrazana. Tamin'ny 1945, i Sukarno ary i Mohammad Hatta dia niady ary nanambara ny fahaleovantenan' i Indônezia. I Sukarno no nitondra ny firenena tamin' ny 1945 ka pôlitika sôsialista no nataony ka nihanahantra dia nahantra ny Indônezianina tamin' ny taona 1950. Tao aorian' ny zava-nitranga tamin' ny 1965-1966, naka ny fahefana i Suharto. Nandritry ny fanjakany, nisy ny fivoarana ara-toekarena, fa nampitodika an' i Indônezia tany amin' ny demôkrasia ny fialan' i Suharto tamin' ny 1998.
1.1 Taona mialoha ny tantara
Teraka tamin' ny 17 Aogositra 1945 ny Repoblikan' i Indônezia tamin' ny fanambaràna ny fahaleovantenan' ny India Hôlandey; i Sukarno sy Hatta no nanao io fanambaràna io.
Taona mialoha ny tantaraHanova
Ny faritany misy ny tamba-nosy indôneziana ankehitriny dia efa nipetrahan' ny olona atao hoe Abôrijina (karazana vazimba), roa alina taona lasa izay. Ny olona abôrijina dia nipetraka tao Indônezia nandritra ny roa alina taona, tamin' izany fotoana izany, noho ny ranomandry miangona any amin' ny tendrontany avaratra sy atsimo, ny lentan' ny ranomasina tamin' izany fotoana izany dia mbola ambany raha mitaha amin' ny lentan' ny ranomasina ankehitriny, ka rehefa nanomboka niakatra ny lentan' ny ranomasina dia lasa tany amin'ny kaontinenta aostralianina ny Abôrijina. Any Papoazia ary any Melanezia no ahitana Abôrijina ankehitriny.
Ny Aostrônezianina dia tonga tao Indônezia tamin' ny taonarivo faharoa tal. J.K. hatramin' ny taona 1500 tal. J.K. Tao ny Abôrijina sy ny Aostrônezianina no nifangaro tamin' ny Abôrijina.
Ny faritany Indônezianina
Ny saritanin' Indonezia, avy amin'ny Central Intelligence Agency.
Ny firenen' i Indônezia dia tamba-nosy any Azia Atsimo Atsinanana, eo amin' ny tamba-nosy eo anelanelan' ny Ranomasimbe Indianina sy ny Ranomasimbe Pasifika (Ranomasin' i Sina Atsimo). Voazara tamba-nosy maro ny tamba-nosy Indônezaianina:
Ny Nosin' i Sonde any andrefana - voazara anelanelan' ny Nosy ben' i Sonde any andrefana (Somatra, Java, Bôrneô, Solaoesy) ary ny Nosy kelin' i Sonde, nosy kely any atsimon' i Indônezia avy any Bali hatrany Timôro
Ny Môlioky any atsinanana, ny nosiny dia i Halmahera any avaratra, i Seram eo fovoany, ary ny Nosy Aru sy ny nosy Tanimbar any atsimo.
Ny Papoazia any amin' ny farany atsinanana.
i Indônezia, ankoatran' i Papoazia, dia lazaina hoe an' ny tamba-nosy mbola ngeza, dia ny Insolindia.
Ny nosy ngeza indrindran' i Indônezia dia Somatra, Bôrneô (zarainy amin' i Malaizia sy Broney), i Papoazia Andrefana, ny tamba-nosin' i Solaoesy ary ny Java, nosy be mponina indrindra ao Indônezia (miisa 100 tapitrisa ny isam-poniny).
Ny Nosy Bali ihany no toerana tena itsangatsanganan' ny vahiny sy ny mpitsangatsangana any Indônezia.
Amin' ny nosy hafa azo soratana, azo lazaina ny Nosy Timôro sy ny Nosy Flores (nisy karazan' olona vaovao hita tany tamin' ny 2003; ny Homo floriensis).
Chief of State and Cabinet Members Archived Septambra 15, 2013 at the Wayback Machine
↑ ((en)) Indonesia, CIA World Factbook, 20 novambra 2008.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Indônezia&oldid=1045820"
Dernière modification le 18 Jiona 2022, à 13:14
Voaova farany tamin'ny 18 Jiona 2022 amin'ny 13:14 ity pejy ity.